N'Anambra, Kọmishọna Azọpụtala Mmadụ Abụọ Nwere Nsogbu Ụbụrụ
Ndị Igbo sị na omere onye o ribidoro na-emere chi kere ya. Ka ọ dị taa, Kọmishọna steeti Anambra na-ahụ maka ihe metụtara ụmụaka na ndị nne bụ Oriakụ Ndidi Mezue azọpụtala mmadụ abụọ nwere nsogbu ụbụrụ na mpaghara ebe dị iche iche n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ.
Maazị Chineto Ozigbo Achịkọbala Ma Kwàdo Asọmpi Mbem Igbo
Ọ kpọtụrụ akpọtụ na nso-nso a dịka otu nwaafọ Igbo ọrụ obi ebere na ịkwalite omenala Igbo na-echu ụra, bụ Maazị Chineto Ozigbo chịkọbàrà asọmpi mbem kara maka ndị na-ama mbem n'ala Igbo.
Ụlọọrụ AIRS Ahazigharịala Ma Chịkọọ Usoro E Si Atụ Ụtụ n'Anambra
Ụlọọrụ ahụ na-ahụ maka ịtụ ụtụ nà ego a na-enweta n'ime steeti Anambra, bụ ụlọọrụ 'Anambra State Internal Revenue Service (AIRS) ahazigharịala usoro ụlọọrụ na ọdụ ahịa dị iche iche si atụ ụtụ na steeti ahụ, ma wepụtakwa atụmatụ a chịkọtara ọnụ a ga na-agbasozị n'ime nke ahụ.
Gọọmenti Anambra akụtùóla ụlọ ahụ tigburu otù nwatakịrị n'Onịtsha
Dịka o kwere na nkwà, gọọmenti steeti Anambra akụtùóla ụlọ ahụ tigburu ótù nwata nwaanyị nọ n'agbata ahọ asatọ mgbe gara aga na mpaghara Modebe Avenue dị n'Ọnịtsha.
Obianọ enyela Igwe Amawbia na Igwe Umuerum asambodo n'Awka
E jidela nnukwu ụgbọala si na steeti Plateau buru ndị mmadụ na-abata Anambra
Gọvanọ Obianọ agbapeela amụmà mmiri ọñụñụ abụọ n'Anambra
COVID-19: Ụlọọrụ China ejirila ihe erimeri kwàdo gọọmenti Anambra
Gọọmenti Anambra eguzobela òtù ọrụ pụrụ iche maka nsogbu dị n'etiti Omor na Umumbo
Ụlọ Ọba Akụ FCMB Ejirila Akpa Osikapa 850 Kwado Gọọmenti Anambra
Korona: Onye Ọrụ Nchekwa Asụgbuola Nwokorobịa Ozo n'Ọnịtsha
Na Nnewi: Gọọmenti Anambra Akụtùóla Ụlọ A Rụrụ n'Okpuru Eriri Ọkụ Latirik
Abigbo Dance Performance at Igbo Day 2019 in Regina, Canada
Abigbo Dance Performance at Igbo Day 2019 in Regina, Canada, Organized by the Igbo Cultural Association of Saskatchewan.
Igba Eze Dance - Igbo Day 2019 in Regina, Canada
Welcoming Umunna Igbo Cultural Association of Manitoba and Saskatoon Igbo Cultural Association to Igbo Day 2019 in Regina, with Igba Eze dance.
Igbo masquerade at Igbo Day 2019 in Regina, SK, Canada. Organised by the Igbo Cultural Association of Saskatchewan https://www.icassask.ca/
Igbo masquerade at Igbo Day 2019 in Regina
Igbo Cultural Association of Saskatchewan (ICAS)'s women, Flavour fans, doing Chimamanda at Igbo Day in Regina, Canada, on August 3, 2019: https://www.icassask.ca/
ICAS Women Dancing Flavour on Igbo Day in Regina
Ndị bi n'Ọnịtsha arịọ enyemaka, dịka iju mmiri tochiri ụfọdụ ụlọ na Fegge
Ndị bi n'Ọnịtsha akpọkuola ma rịọ gọọmenti steeti Anambra ka ọ gbatara ha ọsọ, dịka iju mmuri wara ma tochibido ụfọdụ ụlọ dị na mpaghara B/H Housing Estate Fegge.
Ọ na-adị mma a kpụọ Diji, a kpụnye ya óké ji n'aka, maka na a nyụchaa nsị a kapịàghị ya ọnụ, ọ bụrụ òtòrò. Ka ọ dị taa, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ enyela ndị eze ọdịnala ọhụụ abụọ asambodo iji malite ọrụ n'ozuzu òkè dịka ndị ndu obodo ha dị iche iche.
Igbo sị na onye na-amụ iti ọkpọ buru ụzọ tie akpa aja tupu ọ chọwa onye ọ ga-etigbu. Ya were bụrụ ihe kọwara otu nwa amadị a, bụ Anthony Joshua, siri tichaa akpa àjà ma tigbue Andy Ruiz Jr, na asọmpi ha abụọ nwere.
Victor Osimhen Nọ N'isi Ụgbọ Dịka Ugo Naijiria Kụziere Aguiyi Lesotho Egwu Boolu
Goolu abụọ sitere n'aka Victor Osimhen na goolu nke Alex Iwobi na Samuel Chukwueze nyere wetara Naijiria mmeri ha meriri mba Lesotho site na ọkpụ goolu anọ asatara abụọ na Ntozu maka Iko Mba Afrịka, AFCON, n'afọ 2021 nke otu L agbara ụbọchị ụka n'amaegwuregwu Maseru.
Ụgbọ Olympics Aghaala Naijiria
Okaibe, Naijiria, agbaala ọnyụpa na AFCON ndị erubeghị afọ iri abụọ na atọ na-aga n'ihu ugbua na Ijipt dịka ha na ndị mba Saụt Afrịka gbara onwe ha onye laba onye laba n'amaegwuregwu Al-Salam dị na Cairo, Ijipt, ụbọchị Fraịdee. Mpụtara asọmpi ahụ ezughị ime ka ha banye n'agba nke na-eso agba nke ikpeazụ.
Ntozu AFCON: Ugo Naijiria Eburu Uze Benin
Ugo Ukwu nke Naijiria nọrọ n'amaegwuregwu Godswill Akpabio dị na Uyo were gosi Uze Benin na ha ka na-amụ amụ n'ebe egwu bọọlụ dị. Ugo Ukwu jiri ọkpụ abụọ asatara nanị otu were merie Uze na asọmpi nke otu L maka ntozu nke iko Afrịka.
Dịka ọ na-ahịọ na mba Ijipt ebe AFCON ndị erubeghị afọ iri abụọ na atọ na-aga n'ihu ugbua, Naijiria jiri iwe were gosi mba Zambia na ọ bụ iti na-ama ụzọ akwụkwọ ka ha jiri ọkpụ atọ asatara otu si ha jido n'amaegwuregwu Al Salam na Cairo.
Ntozu Maka AFCON: Ugo Naijiria Ga-ezukọ Ta
Dịka asọmpi maka ntozu AFCON na-ebiri ọkụ, otú egwu bọọlụ ala anyị, Ugo Ukwu, bụ ndị a na-eche na ha ga-ezukọta na Naijiria, ụbọchị taa bụ Mọndee iji were kwado maka asọmpi a iji sonye na AFCON 2021. Asọmpi mbụ nke otu B dị n'etiti Naijiria na ndị mba Benin Republic.
Ndị Onowu Anambra Ekesàárála Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ Ihe Onyinye Ekeresimeesi
Igbo sị na omepùru nwa ogbenye na-emepùru chi ya; ma sịkwa na ọ bụ o jide o nye ka ọha mmụọ na ọha mmadụ na-ekwupùru. N'ịgbaso nke a, òtù ahụ jikọtara ndị onowu na steeti Anambra, bụ òtù a maara dịka 'Anambra State Council of Traditional Rulers' agbaarala ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti ahụ ekeresimeesi, site n'ikesà ọtụtụ ihe onyinye, nke gụnyere ego na akpa osikapa nyegara ha nà òtù ọrụ obi ebere ndị ọzọ dị iche iche sitere okpuru ọchịchị iri abụọ na otu nke steeti ahụ nàkwa mpụga ya.
Mmemme Ekeresimeesi: Ndị Uwe Ojii Ekwe Ndị Anambra Nkwà Ezi Nchekwa
Isi ọchịchị ụwe ojii ala anyị ekwela ndị Anambra nkwà ezi nchekwa na gburugburu niile nke steeti ahụ tupuu, mgbe a na-eme, nakwa mgbe e mèchara mmemme ekeresimeesi a.
Atọrọla Onye Ụkọchukwu Ọzọ na Nsukka
Obodo dere jim jim ugbua n'ime obodo nsukka nke dị na Steeti Enugwu kamgbe ụbọchị Mọndee dịka otu onye ụkọchukwu ụka Katọlik, Malachy Asadu, bụ onye nke a chọrọ, o were bụrụ ndị ntọ akparala ya aka.
Ndị Uwe Ojii Anambra Ejide Ma Kpọgharịa Ndị Omekoome Iri Asaa Na Otu
Igbo sị na ọnụ anaghị ezu ike ma ọ bụrụ na ihe ọ na-ata agwụghị, ma sịkwa na ọ na-abụ a na-egbu ji awaị, ọ na-atọ ụtọ, a na-abachawanye ji. Ka ọ dị taa, ndị uwe ojii steeti Anambra akpụgharịala ndị a na-enyo ènyò na ha bụ ndị omekoome, dị iri asaa na otu n'ọnụ ọgụgụ, bụ ndị a nwụchikọrọ site na mpaghara ebe dị iche iche na steeti ahụ.
Ọkụ Agbarikọọla Otu Ụlọ n'Ụmụokpu Awka
Mkpu akwa dàrànnọọ n'obodo Ụmụokpu dị n'ikpuru ọchịchị Awka South na steeti Anambra, dịka ọkụ ọgbụgba dabìdòrò ma gbaa otu nnukwu ụlọ pịa-pịa. Ya bụ oke ọkụ bụ nke a na-enyo ènyò na ọ bụ nsogbu sitere n'ọkụ latiriiki kpàtàrà ya, ma bụrụkwa nke gbara ya bụ ụlọ gwòògwòò, tinyere ọtụtụ ngwongwo dị n'me ya, nke gbúru nde kwùru nde Naịra.
Ndi na-ege Igbo Radio
Izu uka a4554
Kamgbe Okutoba 20, 2019226735
18th Igbo Studies Association Annual International Conference
2 Ebeano Tunnel Crossing
Ndu Ndi Mmadu
A Gbapeela Okporo Ụzọ Ọhụụ Ndị Ojoto Rụrụ, Nye Ya Aha Ọhụụ
Obianọ Akpọkuo Ndị Igbo Ka Ha Na-Akwàlite Njirimara Ha
Dayọsiis Angịlịkan n'Awka Ebuliela Ụfọdụ Ndị Ụkọchukwu n'Ọkwa
Ịgụ Akwụkwọ N'efu Ga Aga N'iru na Steeti Imo
Goomenti Steeti Imo na Nollywood ebinyela aka n’akwukwo
Ọ kpọtụrụ akpọtụ ma zụọ azụọ nso-nso a dịka ndị ògìgè 'Idemili Cultural Centre' dị n'Ụmụowelle Agụlụ, n'okpuru ọchịchị steeti Anaọcha nke steeti Anambra mèrè emume ịgba ọfala. Ya bụ oke mmemme bụ nke weere ọnọdụ n'isi ogìgè ndị òtù ahụ ma bụrụkwa nke dọtara imirikiti ụmụafọ obodo ahụ.
Ndị Ukpor Ewere Oke Ọñụ Mee Ụbọchị Ụkpọr
Ndị Ebube Igbo Emeela Ụbọchị Omenala Igbo Nke Ahọ 2019
Otu Nwoke Na Nwa ya Nwaanyị Akpụọla Arụ